Muddo Dheer Kaddib Dowladda Soomaaliya oo la Wareegtey Maamulka Hawada Sare ee Dalka (sawirro) – Radio Daljir
Muddo Dheer Kaddib Dowladda Soomaaliya oo la Wareegtey Maamulka Hawada Sare ee Dalka (sawirro)
Juunyo 6, 2017 3:22 g 2
Kulankaas oo ka dhacay xaruunta hay’adda ICAO ee Montreal ayeey madaxa hay’adda ku soo bandhigeen qorshooyin ay hay’addu ugu tala gashay soo wareejinta hawada Soomaaliyeed.
Madaxa qaybta farsamada ee hay’adda ICAO Mr. Ivan Galan ayaa warbixintiisa ku sheegay in qorshaha wareejinta hawada Soomaaliyeed ku kicidoonto lagac dhan $12 Milyan oo dollar, lacagtaas oo laga rabo in ay bixiyaan dowladda Soomaaliya. Mr. Ivan Galan ayaa sidoo kale sheegay in qarashka ay bishiiba ka aruuriyaan hawada Soomaaliya uu yahay $1.2 Milyan oo dollar.
Wasiir Omaar ayaa ka biyo diiday qorshaha ay hay’adda ICAO soo bandhigtay, wuxuna u sheegay madaxda hay’adda ICAO in Soomaaliya uu isbedel dowladeed ka dhacay bishii Feberaayo, dowladdane ka go’antahay in ay hawadeeda soo cishato sida ugu dhaqsiyaha badan.
Wuxuuna u soo gudbiyey qorsh cusub oo ay dowladda Soomaaliya ka shaqeyneysay oo lagu soo wareejindoono hawada dalka Soomaaliya.
Xoghayaha hay’adda ICAO Dr. Fang Liu oo ah haweeneey u dhalatay dalka Shiinaha ayaa warbixin kooban ka soo jeedisay kulankaas, ayada oo sheegtay in ay wixii kaalmo ah ee loo baahanyahay ka geysandoonto sidii hawada Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa dalka Soomaaliya Dowladda Soomaaliya iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Duulista Hawada ee (ICAO) ayaa waxaa ka dhex aloosan muran ku saabsan soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliyeed oo soo jiitamayey in muddu ah.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo u Kuurgalay Howlaha Dekedda Muqdisho
Argagixiyihii Saddexaad ee London oo Magaciisa iyo Masawirkiisa la Shaaciyey
maxamed c/risaaq bogcad 3 years ago
waxaan rajenaya inaysan caqbad ku noqon maamulka somaliland oo sheegta inay ka go,een somalia inteeda kale waa arin muhiim ah inan dib u helno mamulka hawadeena
waa arin aad u wanaagsan waayo muda dheer ayey howshan so jiitameysay marwalba oo natiijadu so dhawaato waxa carqalad ku noqotay isbadaladi xukuumadaha waxaan rajeynaya inay hada dhamaato insha allah
waa maxamed c/risaaq bogcad